LGBTQ कर्पोरेट समानता रेटिंग्स र LGBTQ पेशेवर र उद्यमी समुदाय LGBTQ कर्पोरेट समानता रेटिंग्स र LGBTQ पेशेवर र उद्यमी समुदाय
कुनै पोष्टहरू फेला परेनन्।
देखाउनको लागि अधिक केहि छैन।
सार्वजनिकसाइट सदस्यहरूसाथीहरू मात्रम मात्र
(OutBüro) मनमोहक छ र धेरै अधिक UN को ग्लोबल संग प .्क्तिबद्ध LGBTधेरै अनुक्रमणिका भन्दा म व्यवसायका लागि मानकहरू! - फेब्रिस हौदर्ट - मानव अधिकार अधिकारी @ UN #LGBTप्रश्न # वर्क प्लेस इक्वालिटी # कर्पोरेट ईक्वालिटी
ट्रान्सजेंडर समुदायसँग तपाईंको प्लेटफर्म साझा गर्नका लागि धन्यबाद
हेलो डेनिस, मैले तपाईको भिडियो अन्तर्वार्ता एशले ब्रुन्डेजमा हेरेँ र साँच्चिकै आनन्द उठाए। ट्रान्सजेंडर समुदायसँग तपाईंको प्लेटफर्म साझा गर्नका लागि धन्यबाद। मसँग एक ट्रान्स छोरी छ र उनीमा गर्व छ र यो महत्वपूर्ण छ कि उनी एश्ले जस्ता सफल प्रोफेशनल ट्रान्स महिलाहरू जान्दछिन र देख्छिन्।
त्यहाँ आउटबाइरो जस्तो अरू केहि छैन
हामी प्रतिनिधित्व गर्दछौं 95% of LGBTQ मिडिया (प्रिन्ट र डिजिटल) संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा, र म सबैको बारेमा धेरै सचेत छु LGBTQ मिडिया इकाई विश्वमा। त्यहाँ आउटबरो जस्तो केहि छैन। यो हाम्रो समुदायको लागि पनि ठूलो अवसर हो रोजगारदाता र ब्रान्डको साथ संलग्न हुन LGBTQ अरू कहिँ जस्तो समुदाय।
रिभेन्डेल मिडियाका सीईओ
दृश्यता र प्रतिनिधित्वले समानताको लागि मार्ग सिर्जना गर्दछ त्यसैले आउँदो पुस्तालाई सजिलो हुन्छ।
OutBüro मा पेशेवर नेटवर्किंग दृश्यता र प्रतिनिधित्व समर्थन गर्दछ। मेरो क्यारियरमा अहिलेसम्म सल्लाहकारहरू मेरो सफलताको लागि महत्वपूर्ण भएका छन्। मलाई मन पर्छ कि आउटबरोले सदस्यहरूलाई जडान गर्न र खोजी गर्न अनुमति दिन्छ सल्लाहकार वा उनीहरूको पेशेवर मा बढ्न Mentee एक अर्कालाई सहयोग गर्दछ।
लेखक: सशक्त मतभेद
As LGBTQ हामीले धेरै चुनौतिहरूको सामना गर्छौं जुन अरूले गर्दैनन्। साइट र अद्भुत भिडियो अन्तर्वार्ता पाएकोमा म खुसी छु।
तपाईंले जीनासँग कुराकानी गर्ने भिडियो साझा गर्नुभयो। यसले मान्छेहरूका कथाहरू सुन्न मेरो हृदय भाँच्दछ र कसरी तिनीहरू अस्तित्वको लागि यी सबै मनोवैज्ञानिक संघर्षको सामना गर्छन् LGBTQ. म पनि मेरो प्रामाणिक आफैमा भएको छैन मेरो कार्यस्थल किनकि मलाई भेदभावको डर छ। दुखद तर सत्य। धन्यवाद, डेनिस, तपाईले गर्नु भएको सबैको लागि।
भवन अर्थपूर्ण व्यावसायिक जडानहरूले तपाईंको क्यारियरमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ.
आउटबरो जहाँ तपाईं सम्बन्धित हुनुहुन्छ।
एक उद्यमी बन्ने प्रायः एक्लो, चुनौतीपूर्ण, थ्रिलिंग, डरावना, र रमाईलो हुन्छ। जादु र चमत्कार हुन्छ जब हामी आफैंमा विश्वास गर्छौं र कार्य गर्छौं।
आउटबरो जहाँ तपाईं फल्नुहुन्छ।
तपाईं स्कूलमा आफ्नो छनौट शीर्षकहरू मात्र सिकिरहनु भएको छैन, तपाईं सम्भवतः आफ्नै बारेमा पनि धेरै सिक्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो नेटवर्क जैविक रूपमा लामो आवश्यक हुन्छ तपाईंले आवश्यक पर्नु अघि।
आउटबरो - तपाईं हुर्कने ठाउँमा।
LGBTQ गैर नाफा
तपाईंको एक्सपोजर स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय मा बढाउनुहोस् LGBTQ समुदाय र कम्पनीहरू / ब्रान्डहरूको साथ। स्वयंसेवकहरू, इंटर्नहरू, पेशेवरहरू, र बोर्ड सदस्यहरूबाट गुणात्मक प्रतिभा आकर्षित गर्नुहोस्।
आउटबरो - जहाँ तपाईं फस्टाउनुहुन्छ।
रोजगारदाता र ब्रान्डहरू
उच्चारण: [आउट] [द्वारा]oo r-oh]
परिभाषा र अर्थ:
बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय भित्र एक सामान्य, राम्रोसँग स्थापित मुहावरा LGBTक्यू समुदायले यो दर्साउँदै कि कोहीले अब कमान्डमा आफ्नो पहिचान लुकाइरहेको छैन र कपाटको "आउ आउट" को कार्यलाई जनाउँछ।
कार्यालय जर्मनमा "अफिस" को अर्थ हुन्छ। जब सही रूपमा उच्चारण गरिन्छ यो अंग्रेजी शब्द "ब्यूरो" जस्तो ठ्याक्कै मिल्छ, जसको अर्थ समाचार वा सूचना स collecting्कलन वा वितरण, कामको समन्वय, वा निर्दिष्ट सेवाहरू प्रदर्शन गर्नका लागि एउटा कार्यालय हो; एजेन्सी